Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay qaraarka gurmadka abaaraha - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay qaraarka gurmadka abaaraha
Xildhibaanada baarlamaanka oo maalmihii ugu dambeysay ka doodayay dhameystirka qaraarka gurmadka abaaraha dalka ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyay qodobkaasi.
Kulan ay xildhibaanada baarlaamaanka Soomaaliya la yeesheen guddiyada ku shaqada leh abaaraha dalka ayaa tallooyin ka dhageystay guddigaasi, kaas oo ku qotoma xoojinta gurmadka abaaraha iyo sidii loo sugi lahaa qaabka gurmadka loo sameeynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa xildhibaanada baarlamaanka uga war bixiyay kulan uu guddoonka baarlamaanka la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, kaasi oo looga hadlay xoojinta gurmadka abaaraha dalka.
Ansixinta xildhibaanada baarlamaanka ee qarraarka gurmadka abaaraha dalka oo ahaa kii ugu horeeyay lagu meel amriyey codeyn gacan taag aheyd, ayaa ugu dambeyntii waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Dhinaca kale, kulan ay saxaafaddu dibad-joog ka ahayd ayaa waxaa wada yeeshay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo si hoose ugu eegayay xaaladda uu dalka maraayo, wuxuuna kulankaasi markii dambe kusoo dhamaaday mid is-afgarad ah.